15 : मुटुले कहिलेबाट काम गर्न सुरु गर्छ ?
प्रश्न : मुटुले कहिलेबाट काम गर्न सुरु गर्छ ? यसले के काम गर्छ ? - जेबी
उत्तर : मानव शरीरमा सबैभन्दा पहिला काम गर्न सुरु गर्ने अंग मुटु हो । मानिसको जीवन मुटुको धड्कनबाट सुरु हुन्छ र अन्त्य पनि मुटु बन्द भएसँगै हुन्छ । मानिसको मुटु आमाको पेट भित्र रहँदादेखि नै चल्न थाल्छ । आमाको पेटमा ७ देखि ८ हप्ताको हुँदा मुटु चल्न थाल्छ । मुटुले शरीरका सबै अंगमा रगत पम्प गरेर पठाउने काम गर्छ । जबसम्म मुटु राम्रोसँग चल्छ मानिस स्वस्थ रहन्छ तर जब यसमा गडबड आउँछ शरीरमा विभिन्न रोग तथा समस्या देखिन थाल्छ ।
पछिल्लो समय मुटुका बिरामी बढेका छन् । मुटुरोगमध्ये विशेषगरी कोरनरी आर्टरी डिजिज रक्तचाप, सुगर, खानपान, 18 र उमेर बढ्दै जाँदा देखिन्छ । मुटुका रोग लगाउने जोखिमलाई परिवर्तनशील र परिवर्तन गर्न नसकिने गरी दुई भागमा छुट्याउन सकिन्छ । व्यवहार र चालचलन परिवर्तनशील जोखिम हुन् भने उमेर, लिंग, वंशाणुगत आदि परिवर्तन गर्न नसक्ने जोखिम हुन् ।
मुटुरोग विलासी जीवन, मोटोपन, उच्च रक्तचाप, अस्वस्थ 18का कारण धेरै देखिन थालेको छ । त्यसकारण यसलाई मानिस आफैंले नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छन् । जहाँ आरामदायी 18 छ, त्यहाँ कोरनरी हार्ट डिजिज बढी हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा गाउँमा शारिरीक परिश्रम बढी हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ मुटुरोग सहरमा भन्दा कम छ ।
पछिल्लो समय रेमिट्यान्स लगायतका कारण जीवनलाई सरलीकरण गर्ने क्रममा मानिस विलासी बन्दै गएका छन् । गाउँबाट सहर बसाइ सरेकाहरुले सहरी 18को नक्कल गर्दा थप समस्या बल्झिएको छ । योसँगै बढिरहेको तनावले पनि रोग थपिएको छ । त्यसैले मानिसले मुटु रोगबाट बच्न स्वस्थ 18 अपनाउन जरुरी छ ।
- डा रत्नमणि गजुरेल, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ, मनमोहन कार्डियोथोरासिक, भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्स सेन्टर